Elite 3, nhọrọ dị ọnụ ala Jabra, na-edobe àgwà [Nlebaanya] | Ozi gadget
Eji aka na mmalite nke Jabra Elite 7 Pro na anyị tụlere ebe a na Actualidad Gadget n'oge na-adịbeghị anya, ụzọ dị ọnụ ala na Jabra katalọgụ ruo taa rutere, anyị kwuru etu ọ ga-esi bụrụ ihe ọzọ gbasara Elite 3, ụdị ya “ejidere” nke ka bụ ngwaahịa Jabra na ndị niile nke iwu.
Anyị na-ewetara gị nyocha miri emi nke Jabra Elite 3, ihe nlereanya nke nwere oke nnwere onwe na mgbochi mmiri na ụda kacha mma. Lelee ha na anyị ka ị mata ihe ekweisi Jabra kacha dị ọnụ ahịa nwere inye ruo taa.
3 Jabra Sound + ga-enwerịrị
4 Nguzogide na nkasi obi
5 Nnwere onwe na echiche mgbe ejiri ya
N'ihe gbasara ọdịdị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ isi ekweisi Jabra, A na-echekwa ahịrị imewe nke ụlọ ọrụ ahụ, ngwaahịa nke nkasi obi na ụda na-emeri nke ọma karịa ihe ọ bụla ọzọ. N'ụzọ dị otú a, Jabra na-aga n'ihu na-ejigide ụdị ya dị iche iche na ọ bụ ezie na ha nwere ike ọ gaghị adị ka ndị kasị mma na ahịa, ha nwere ihe kpatara ya, nke dịlarị karịa ihe ọtụtụ ndị na-emepụta ihe nwere ike ikwu.
Nledo ekweisi: 20,1 × 27,2 × 20,8mm
Ntụle ikpe: 64,15 × 28,47 × 34,6mm
Ikpe ahụ, n'aka nke ya, na-echekwa imewe na akụkụ nke ika ahụ, ụdị "pillbox" nke a na-ahụkarị na Jabra na nke, dị ka ekweisi, na-elekwasị anya naanị na ịdị irè na ịdịte aka. N'oge a, ebe ha chọrọ ime "ị ọhụrụ" ndị a Jabra bụ kpomkwem na nso nke na agba, ebe na mgbakwunye na nke kpochapụwo nwa na ìhè gold, anyị ga-enwe ike ịnweta version na n'Òtù Ndị Agha Mmiri-acha anụnụ anụnụ na ọzọ na ezi ìhè-acha odo odo. anya na-adọta. NAIhe nlereanya a nyochara n'ọnọdụ anyị bụ oji, nke gụnyere na ngwugwu: Nkịta ntị silicone isii (na-agụta ndị agbakwunyere na ntị ntị), akpa chaja, eriri USB-C, na ntị ntị.
Anyị nwere ekweisi nwere ya na ndị ọkwọ ụgbọala (ndị na-ekwu okwu) nke 6 millimeters, nke a na-enye ha dabere na nkọwa teknụzụ 20 Hz ruo 20 kHz bandwit maka ịkpọghachi egwu na site na 100 Hz ruo 8 kHz mgbe anyị na-ekwu maka mkparịta ụka ekwentị. N'ikwekọ na nke ahụ e kwuru n'elu, o nwere igwe okwu MEMS anọ na-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe mkparịta ụka doro anya, ihe na-emekarị na Jabra. The bandwit nke microphones bụ n'etiti 100 Hz na 8 kHz, dị ka anyị hụrụ na nkọwa banyere bandwit nke ekwentị oku.
Nchaji ikpe: 33,4 grams
Isi ekwe: 4,6 gram
Qualcomm aptX maka ọdịyo HD
Ebee ka m ga-azụta Jabra Elite 3 na ọnụahịa kacha mma? N'ime EGO A.
Na Njikọta larịị, ndị a ekweisi nwere Bluetooth 5.2 nke kasị kpochapụwo profaịlụ na-etinyere A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, na a nso nke mbụ ojiji nke 10 mita na ekwe omume. nke iburu ngwaọrụ isii n'isi. N'ụzọ doro anya, n'ihi iji Bluetooth 5.2, ha nwere sistemụ mgbanye akpaka mgbe anyị wepụrụ ha n'igbe ahụ. yana mmechi akpaaka mgbe ha dị nkeji iri na ise na-enweghị njikọ ma ọ bụ nkeji 15 na-enweghị ọrụ.
Jabra Sound + ga-enwerịrị
Ngwa Jabra bụ mgbakwunye sọftụwia nke ga-enye anyị ohere ịme mgbanwe ndị dị mkpa, gafere bọtịnụ arụ ọrụ achọtara na ekweisi ekwe ntị yana nke anyị nwere ike hazie ka ọ masịrị anyị na ngwa ahụ, anyị nwere ikike ịha nhata yana mmelite ngwanrọ na-eme ka ngwanrọ gị baa uru yana nwee ike ikpebi ịzụta ha. Ngwa a, nke dakọtara na ngwaọrụ gam akporo na iOS, na-enye gị ohere ịme ọtụtụ nhazi nke kwesịrị ịnwale maka ọtụtụ ihe.
N'ụzọ dị otú a, anyị na-akwado ka ị na-aga na nke ọ bụla n'ime videos nke anyị nyochara Jabra ngwaọrụ n'oge ndị ọzọ ka i wee hụ na arụmọrụ nke Sound +, a Jabra ngwa bụ kpamkpam free download.
Nguzogide na nkasi obi
N'okwu a, anyị nwere nguzogide mmiri na splashes na IP55 asambodo, nke a na-ekwe nkwa na anyị ma ọ dịkarịa ala na anyị ga-enwe ike iji ha na mmiri ozuzo yana mgbe anyị na-eme ọzụzụ, N'akụkụ a, Jabra na-ejigide ụkpụrụ dị mma n'agbanyeghị ma, dị ka anyị kwuru, Anyị na-eche ngwaahịa dị ọnụ ala ihu ruo taa na katalọgụ ụlọ ọrụ ahụ.
N'otu aka ahụ, na ọkwa nke imeziwanye ogo njikọ ahụ na nkasi obi nke iji, Jabra Elite 3 ndị a nwere ngwakọta atọ nke ngwanrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị nke nwere ike ime ka ndụ anyị dịkwuo mfe:
Ngwa ngwa ngwa Google, maka njikọta na ịrụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo na Chromebook dakọtara.
Kpatụ Spotify, iji melite na hazie nhazi nke bọtịnụ mgbe anyị na-eji ikpo okwu ọkpụkpọ Spotify.
Alexa jikọtara ọnụ ka ya na onye enyemaka mebere nke Amazon mekọrịtakwa.
Nnwere onwe na echiche mgbe ejiri ya
Jabra enyela anyị data a pụrụ ịdabere na ya gbasara mAh nke batrị, ihe a na-ahụkarị na ika ahụ, Otú ọ dị Ha na-ebu amụma awa 7 nke nnwere onwe yana ụgwọ yana ihe ruru awa 28 ma ọ bụrụ na anyị gụnye ebubo ndị emere na ikpe ahụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-ekwekwa anyị nkwa na naanị nkeji iri nke chaja ga-enweta ihe dịka otu awa iji. A na-ebipụtaghachi data ndị a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpam kpam na ule anyị, karịsịa na-atụle na ha enweghị nkwụsị mkpọtụ (ANC) na ọ bụrụhaala na anyị anaghị eji ọnọdụ HearThrough dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ Jabra niile dị iche iche.
Ụda ụda dị mma nke ukwuu mgbe ị na-atụle ọnụahịa ahụ, ụkpụrụ dị mma nke a na-edobe na Jabra na oge, na nke ahụ bụ. Enwere ike nweta Elite 3 ndị a maka ihe na-erughị euro 80 na ebe a na-ere ere, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ ịzụta ngwaahịa Jabra maka oge mbụ ma ọ bụ nwee nnọchi maka oge "pụrụ iche". Obi abụọ adịghị ya, dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, Jabra jisiri ike mee ngwaahịa na-enweghị nkọwa nke na-enye ihe ọ na-enye.
Ogo ụda na ike dị ezigbo mma
Idozi anya na oku ekwentị
Ọnụ ego dị obere na Jabra
Nhazi nwere ike ikpebi
Enweghị paịlị dị mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Elite 3, nhọrọ dị ọnụ ala nke Jabra, na-ejigide ịdịmma [Nyocha]